Sintomy Lockheed Martin T-33 FS2004
Fighter sy ny fampiofanana. Misy amin'ny 3 repaints izay "NASA".
Re nanitsy teny avy atỳ amiko. Henoy ny motera hery! Tena tsara ny manidina, fa somary miadana. Ny T-33 Lockheed T-Bird dia fiaramanidina. Izany no navoakan'ny Lockheed ary nanao ny sidina voalohany ao 1948, piloted amin'ny Tony LeVier.
kisoa keliko Conrad